အိမ်မှာ ကပ် ထား ရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေး လိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ် – GaMone Media
Homepage / Knowledge / အိမ်မှာ ကပ် ထား ရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေး လိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်
အိမ်မှာ ကပ် ထား ရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ ကင်းဝေး လိမ့်မယ် ယုံကြည်ပါတယ်
အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ..ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ မြန်မာတစ်ပြည်လုံး ကင်းဝေးလိမ့်မယ် လို့ ယုံကြည် ပါတယ်….
ရှေးရှေးတုန်းကလည်း ကျောက်ရောဂါ..ပုလိပ်ရောဂါ.. ဝမ်းရောဂါ အစရှိသဖြင့် ကူးစက်လွယ်တဲ့ ရောဂါဆိုးတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတယ်…။
တရွာလုံး ရွာလုံးကျွတ် ကူးကုန်ပြီးလူတွေ အကုန်သေကြသတဲ့.. လူတွေသေတော့ မကောင်းဆိုးရွားတွေ ပျော်တာပေါ့.. သူတို့တွေ ပျော်မြူးပြီး ရွာတွေထဲ ဝင်လာကြသတဲ့.. ရွာတွေ ထဲက လူတချို့လည်း တခြားလွတ်ရာ ရှောင်တဲ့လူကရှောင်..ပြောင်းတဲ့လူက ပြောင်းပေါ့….အဲလိုနဲ့ ရွာတွေဟာ တစပြင် လို အကုန် လူခြေ တိတ်ပြီး ခြောက်ကပ်နေတာပေါ့..
ဒါပေမဲ့….ရွာတစ်ရွာမှာတော့ တဲစုတ်စုတ် အိမ်လေး တစ်အိမ်မှာ ရှိတဲ့လူတွေ ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘဲ အကောင်းတိုင်း ကျန်နေသတဲ့…. မကောင်းဆိုးရွားတွေလည်း အဲဒိတဲစုတ်လေးထဲ ဝင်ဘို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပေမဲ့ ဘယ်လိုမှ ဝင်လို့မရကြဘူး…..။ ကပ်ဘေးကြီး ကင်းသွားတော့မှ ရွာ ကနေ ရှောင်သွားကြတဲ့ လူတချို့ ပြန် လာကြတယ်..
ပြန်ရောက်လာတဲ့ လူတွေက ဒီလူဆင်းရဲတွေ အိမ်…..ဘာဖြစ်လို့များ ကပ်ရောဂါက ကွင်းသွားသလဲလို့ စူးစမ်းကြတာပေါ့.. အဲဒီမှာ ဘာသွားတွေ့သလဲ ဆိုတော့…..တဲလေးရဲ့ တံစက်မြိတ် သက်ကယ်တွေကြားထဲမှာ ပေရွက်ခေါက်လေး တစ်ခုကို တွေ့ကြရသတဲ့…..
ပေရွက်ပေါ်မှာ.. ရေးထိုးထားတဲ့ ဂါထာတော်ရဲ့ တန်ခိုးကြောင့် ကပ်ရောဂါလည်း မဝင်နိုင်….မကောင်းဆိုးရွားလည်း ရှောင်ပြေး ရတဲ့ အဖြစ်ပေါ့နော်.. ဒီဂါထာလေးကို ရေးကူးပြီး အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းမှာ..ကပ်ထားရင် ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးကနေ မြန်မာ တစ်ပြည်လုံး ကင်းဝေး လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်….
ယုံကြည်သူများ ဒီဂါထာကို ပူဇော်ကြပါ..နန်းကတော့ အကြိမ်ကြိမ် စမ်းသပ်ဘူးပါတယ်…. ညဘက်တွေ ခွေးအူနေရင် ဂါထာကို ရွတ်ပြီး အူနေတဲ့အရပ်ဘက်ကို လက်ငြိုးထိုးထားလိုက်ပါတယ်….
ထူးဆန်းတာက ခွေးအူသံ တိကနဲ ရပ်သွားတာပါ…..လုံးဝကို တိတ်ဆိတ် သွားတာမျိုး ခဏခဏ ကြုံရပါတယ်…. ။ ဒါကြောင့် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ အိမ်မှာကပ်လှူပူဇော်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ…..။
သိရသ္မိံဂါထာတော်
၁။ သိရသ္မိံမေ ဗုဒ္ဓသေဋ္ဌော၊
သာရိပုတ္တောစ ဒက္ခိဏေ ။
ပုရတော ပိဋကတ္တယံ ။
၂။ ပစ္ဆိမေ မမ အာနန္ဒော၊
စတုဒ္ဒိသာ ခီဏာသဝါ ။
သမန္တာ လောကပါလာစ ၊
ဣန္ဒာဒေဝါ သ ဗြဟ္မကာ ။
၃။ ဧတသေံ အာနု ဘာဝနေ၊
သဗ္ဗေဘယာ ဥပဒ္ဒဝါ ။
အနေက အန္တရာယာပိ ၊
ဝိနဿန္တု အသေသတော ။
၁။ ဗုဒ္ဓသေဋ္ဌော – ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်
မေ – တပည့်တော်၏။သိရသ္မိံ– ဦးခေါင်းထက်၌။
တိဋ္ဌတု – ရွှင်ပျော်နှလုံး သီတင်းသုံးတော်မူပါစေသတည်း ။
သာရိပုတ္တောစ – အရှင်သာရိပုတ္တရာ
မထေရ်မြတ်ကြီးသည်လည်း။ မေ – တပည့်တော်၏။
ဒက္ခိဏော – လက်ယာပခုံး၌။ တိဋ္ဌတု- ရပ်တည် သီတင်းသုံးတော်မူပါစေသတည်း။
မောဂ္ဂလ္လာနော – အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်မထေရ်မြတ်ကြီးသည်။ မေ – တပည့်တော်၏။ ဝါမအံသေ – လက်ဝဲပခုံးထက်၌။တိဋ္ဌတု – သီတင်းသုံးတော်မူပါစေသတည်း။
ပိဋကတ္တယံ – ပိဋကသုံးတန် ဓမ္မက္ခာန်သည်။ မေ – တပည့်တော်၏။ပုရတော – မျက်နှာမူလတ် အရှေ့အရပ်၌ ။ တိဋ္ဌတ ု- စံပါယ်ကိန်းဝတ် ရပ်တည်ပါစေသတည်း ။
၂။ အာနန္ဒော – အရှင်အာနန္ဒာမထေရ်မြတ်ကြီးသည်။ မေ – တပည့်တော်၏။ ပစ္ဆိမေ – မျက်နှာကွယ်ထား နောက်ရပ်ပါး၌။ တိဋ္ဌတု – ရပ်တည်သီတင်းသုံးတော်မူပါစေသား။
ခီဏာသဝါ – ရဟန္တာမထေရ်မြတ်ကြီးတို့သည်။
မမ – တပည့်တော်၏။စတုဒ္ဒိသာ – ခန္ဓာတည်ရာ အရပ်လေးမျက်နှာတို့၌။ တိဋ္ဌတု- ရပ်တည်နေကြ ပါစေသား။
သဗြဟ္မကာ – ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်သော။ဣန္ဒာဒေဝါသ – သကြား နတ် အပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်း။ လောကပါလာစ – လောကစောင့်ကြပ် နတ်မြတ် အပေါင်းတို့သည်လည်းကောင်း။ မမ – အကျွန်ု ပ်၏ ။
သမန္တာ – ထက်ဝန်းကျင် ပတ်ပတ်လည်တို့၌။
တိဋ္ဌတု- နှလုံးရွှင်ပျ ရပ်တည်နေကြပါစေသား။
၃။ ဧတေသံ – ထိုရတနာသုံးပါး နတ်သိကြားဗြဟ္မာအပေါင်းတို့၏။ အာနုဘာဝေန – ရှိန်ဝါတန်ခိုး စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးကြောင့်။ သဗ္ဗေ – ကြွင်းမဲ့ဥဿ ုံ အလုံးစုံကုန်သော။ ဘယဥပဒ္ဒဝါ – ဘေးဥပါဒ်တို့သည် လည်းကောင်း။ အနေကအန္တရာယာပိ – တစ်ပါးမက များလှကုန်သော ကပ်အန္တရာယ် အသွယ်သွယ်တို့သည်လည်းကောင်း။ အသေသတော – ကြွင်းကျန်မရှိ ပက တိအားဖြင့်။ ဝိနာသန္တု – ပိန်းကြာဖက်တွင် ရေမတင်သို့ ကင်းစင်လွင့်ပျောက်ကြပါစေသတည်း ။
ကပ်ကြီး သုံးပါးကို ကျော်နင်းနိုင်ကြပါစေ……။ကံကောင်းသူများ ဤ ဂါထာကို တွေ့ကြလိမ့်မည်ဟု ယူဆမိပါသည်..
ရဟန်း၊ရှင်၊လူ၊သူတော်စင် သတ္တဝါများအားလုံး ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအားလုံး မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းစိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပြီး ဆန္ဒနဲ့ဘဝတစ်ထပ်တည်းဖြစ်ကာ ရောဂန္တရကပ်ကြီးမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ….။
အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကေန ျမန္မာတစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝးလိမ့္မယ္ လို႔ ယုံၾကည္ ပါတယ္….
ေရွးေရွးတုန္းကလည္း ေက်ာက္ေရာဂါ..ပုလိပ္ေရာဂါ.. ဝမ္းေရာဂါ အစရွိသျဖင့္ ကူးစက္လြယ္တဲ့ ေရာဂါဆိုးေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကဘူးတယ္…။
တ႐ြာလုံး ႐ြာလုံးကြၽတ္ ကူးကုန္ၿပီးလူေတြ အကုန္ေသၾကသတဲ့.. လူေတြေသေတာ့ မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြ ေပ်ာ္တာေပါ့.. သူတို႔ေတြ ေပ်ာ္ျမဴးၿပီး ႐ြာေတြထဲ ဝင္လာၾကသတဲ့.. ႐ြာေတြ ထဲက လူတခ်ိဳ႕လည္း တျခားလြတ္ရာ ေရွာင္တဲ့လူကေရွာင္..ေျပာင္းတဲ့လူက ေျပာင္းေပါ့….အဲလိုနဲ႔ ႐ြာေတြဟာ တစျပင္ လို အကုန္ လူေျခ တိတ္ၿပီး ေျခာက္ကပ္ေနတာေပါ့..
ဒါေပမဲ့….႐ြာတစ္႐ြာမွာေတာ့ တဲစုတ္စုတ္ အိမ္ေလး တစ္အိမ္မွာ ရွိတဲ့လူေတြ ကေတာ့ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ အေကာင္းတိုင္း က်န္ေနသတဲ့…. မေကာင္းဆိုး႐ြားေတြလည္း အဲဒိတဲစုတ္ေလးထဲ ဝင္ဘို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေပမဲ့ ဘယ္လိုမွ ဝင္လို႔မရၾကဘူး…..။ ကပ္ေဘးႀကီး ကင္းသြားေတာ့မွ ႐ြာ ကေန ေရွာင္သြားၾကတဲ့ လူတခ်ိဳ႕ ျပန္ လာၾကတယ္..
ျပန္ေရာက္လာတဲ့ လူေတြက ဒီလူဆင္းရဲေတြ အိမ္…..ဘာျဖစ္လို႔မ်ား ကပ္ေရာဂါက ကြင္းသြားသလဲလို႔ စူးစမ္းၾကတာေပါ့.. အဲဒီမွာ ဘာသြားေတြ႕သလဲ ဆိုေတာ့…..တဲေလးရဲ႕ တံစက္ၿမိတ္ သက္ကယ္ေတြၾကားထဲမွာ ေပ႐ြက္ေခါက္ေလး တစ္ခုကို ေတြ႕ၾကရသတဲ့…..
ေပ႐ြက္ေပၚမွာ.. ေရးထိုးထားတဲ့ ဂါထာေတာ္ရဲ႕ တန္ခိုးေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါလည္း မဝင္ႏိုင္….မေကာင္းဆိုး႐ြားလည္း ေရွာင္ေျပး ရတဲ့ အျဖစ္ေပါ့ေနာ္.. ဒီဂါထာေလးကို ေရးကူးၿပီး အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္းမွာ..ကပ္ထားရင္ ကပ္ေရာဂါ ေဘးႀကီးကေန ျမန္မာ တစ္ျပည္လုံး ကင္းေဝး လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္….
ယုံၾကည္သူမ်ား ဒီဂါထာကို ပူေဇာ္ၾကပါ..နန္းကေတာ့ အႀကိမ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္ဘူးပါတယ္…. ညဘက္ေတြ ေခြးအူေနရင္ ဂါထာကို ႐ြတ္ၿပီး အူေနတဲ့အရပ္ဘက္ကို လက္ၿငိဳးထိုးထားလိုက္ပါတယ္….
ထူးဆန္းတာက ေခြးအူသံ တိကနဲ ရပ္သြားတာပါ…..လုံးဝကို တိတ္ဆိတ္ သြားတာမ်ိဳး ခဏခဏ ႀကဳံရပါတယ္…. ။ ဒါေၾကာင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ အိမ္မွာကပ္လႉပူေဇာ္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ…..။
သိရသၼိံဂါထာေတာ္
၁။ သိရသၼိံေမ ဗုဒၶေသေ႒ာ၊
သာရိပုေတၱာစ ဒကၡိေဏ ။
ပုရေတာ ပိဋကတၱယံ ။
၂။ ပစၦိေမ မမ အာနေႏၵာ၊
စတုဒၵိသာ ခီဏာသဝါ ။
သမႏၲာ ေလာကပါလာစ ၊
ဣႏၵာေဒဝါ သ ျဗဟၼကာ ။
၃။ ဧတေသံ အာႏု ဘာဝေန၊
သေဗၺဘယာ ဥပဒၵဝါ ။
အေနက အႏၲရာယာပိ ၊
ဝိနႆႏၲဳ အေသသေတာ ။
၁။ ဗုဒၶေသေ႒ာ – ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္
ေမ – တပည့္ေတာ္၏။သိရသၼိံ– ဦးေခါင္းထက္၌။
တိ႒တု – ႐ႊင္ေပ်ာ္ႏွလုံး သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း ။
သာရိပုေတၱာစ – အရွင္သာရိပုတၱရာ
မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္လည္း။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။
ဒကၡိေဏာ – လက္ယာပခုံး၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။
ေမာဂၢလႅာေနာ – အရွင္ေမာဂၢလႅာန္မေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ဝါမအံေသ – လက္ဝဲပခုံးထက္၌။တိ႒တု – သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသတည္း။
ပိဋကတၱယံ – ပိဋကသုံးတန္ ဓမၼကၡာန္သည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ပုရေတာ – မ်က္ႏွာမူလတ္ အေရွ႕အရပ္၌ ။ တိ႒တ ု- စံပါယ္ကိန္းဝတ္ ရပ္တည္ပါေစသတည္း ။
၂။ အာနေႏၵာ – အရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္ႀကီးသည္။ ေမ – တပည့္ေတာ္၏။ ပစၦိေမ – မ်က္ႏွာကြယ္ထား ေနာက္ရပ္ပါး၌။ တိ႒တု – ရပ္တည္သီတင္းသုံးေတာ္မူပါေစသား။
ခီဏာသဝါ – ရဟႏၲာမေထရ္ျမတ္ႀကီးတို႔သည္။
မမ – တပည့္ေတာ္၏။စတုဒၵိသာ – ခႏၶာတည္ရာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌။ တိ႒တု- ရပ္တည္ေနၾက ပါေစသား။
သျဗဟၼကာ – ျဗဟၼာအေပါင္းတို႔ႏွင့္တကြ ျဖစ္ကုန္ေသာ။ဣႏၵာေဒဝါသ – သၾကား နတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ ေလာကပါလာစ – ေလာကေစာင့္ၾကပ္ နတ္ျမတ္ အေပါင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း။ မမ – အကြၽႏ္ု ပ္၏ ။
သမႏၲာ – ထက္ဝန္းက်င္ ပတ္ပတ္လည္တို႔၌။
တိ႒တု- ႏွလုံး႐ႊင္ပ် ရပ္တည္ေနၾကပါေစသား။
၃။ ဧေတသံ – ထိုရတနာသုံးပါး နတ္သိၾကားျဗဟၼာအေပါင္းတို႔၏။ အာႏုဘာေဝန – ရွိန္ဝါတန္ခိုး စြမ္းရည္အမ်ိုးမ်ိုးေၾကာင့္။ သေဗၺ – ႂကြင္းမဲ့ဥႆ ုံ အလုံးစုံကုန္ေသာ။ ဘယဥပဒၵဝါ – ေဘးဥပါဒ္တို႔သည္ လည္းေကာင္း။ အေနကအႏၲရာယာပိ – တစ္ပါးမက မ်ားလွကုန္ေသာ ကပ္အႏၲရာယ္ အသြယ္သြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း။ အေသသေတာ – ႂကြင္းက်န္မရွိ ပက တိအားျဖင့္။ ဝိနာသႏၲဳ – ပိန္းၾကာဖက္တြင္ ေရမတင္သို႔ ကင္းစင္လြင့္ေပ်ာက္ၾကပါေစသတည္း ။
ကပ္ႀကီး သုံးပါးကို ေက်ာ္နင္းႏိုင္ၾကပါေစ……။ကံေကာင္းသူမ်ား ဤ ဂါထာကို ေတြ႕ၾကလိမ့္မည္ဟု ယူဆမိပါသည္..
ရဟန္း၊ရွင္၊လူ၊သူေတာ္စင္ သတၱဝါမ်ားအားလုံး ကမာၻသူကမာၻသားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံသူျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံး ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္းစိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ျပည့္စုံၿပီး ဆႏၵနဲ႔ဘဝတစ္ထပ္တည္းျဖစ္ကာ ေရာဂႏၲရကပ္ႀကီးမွကင္းေဝးႏိုင္ၾကပါေစ….။
Previous post မက်စရာကောင်းတဲ့ အလှတရားတွေကိုအိပ်ရာထက် မှာအထင်းသားလေးပြသလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
Next post အရမ်းမြင့်မားတဲ့ တောင်တန်းကြီးကိုကြိုးစားပမ်းစားတက်ယူပြီးနောက် တောင်ထိပ် ကိုရောက်ရှိလာလို့ ပျော်ရွှင်နေတဲ့မအေးသောင်း